February 2013 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ချီးကျူးပါတယ်။ ငါတို့်တွေကော ဒီလိုလုပ်နိုင်ပြီလား
Author: lubo601 | 8:20 PM | 1 Comment |
Mg Ogga shared Myawady News's photo.
Israel အမျိုးသမီး တစ်ယောက် Palestine ကောင်လေးကို ကာကွယ်ခဲ့တဲ့ သတင်းဟာ ကမ္ဘာ့ လူသား သန်းပေါင်းမြောက်များစွာကို အမြင်သစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ထိုမျှမက နှစ်ပေါင်းများစွာ ရန်သူလိုဆက်ဆံနေ ခဲ့ကြတဲ့ Israel နဲ့ Palestine ကြားမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆေးတစ်ခွက်လဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပင်လုံစာချုပ်နှင့် ၁၉၄၇ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ
by Aung Zaw Bo on Thursday, February 28, 2013 at 2:38am ·
၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကြီးရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို မဆန်းစစ်ခင်မှာ ဘာဖြစ်လို့ ပင်လုံစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးဖို့ လိုအပ်သလဲံဆိုတာကို နည်းနည်းလေးပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ချင်ပါတယ်။
“ဓာတုအဆိပ်သင့်မှု ကင်းရန် အသီးအရွက်မချက်မီ ဆားရည်စိမ်ထားသင့်”
KhingKhing Su and Hlaing Bwa Maung shared Royal Hero Media's photo.
Thein Moe shared Maha Mingyi's photo.
သူရဲကောင်းရဲ့ ဓါးသည် သံချေး ဘယ်သောအခါမှ မတက်တတ်ပါ၊ သူရဲကောင်းသည် ရန်ကုန်
မော်တင် ကမ်းနားလမ်းဈေး၏ ညသန်းကောင်တွင် စက္ကန့်မလပ် ဖေါက်ဖွားလာသော
မင်္ဂလာတရားတော်နှင့်အညီ ကျင့်ကြံခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်.......
ယနေ့... ကျွန်တော်တို့ အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားရှိသော ယနေ့ခေတ် လူလတ်ပိုင်းများသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှူးပြုသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအကြောင်းကိုသော် လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့သမိုင်းကိုသော်လည်းကောင်း၊ တီးမိခေါက်မိရှိကြပါသည်။
Author: lubo601 | 8:57 AM | 1 Comment |
မှော်ဘီ နည်းပညာကျောင်းသို့သွားသော မင်္ဂလာဒုံမှ ဖယ်ရီကားရှေ့တွင် ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် စကားများနေကြသည်။
ကောင်မလေးက" ဇေယျ နင်အဲ့ဆေးစွဲတာ ဖြတ်မလား ငါ့ကို ဖြတ်မလားပြောတော့ဟာ" ဟုပြောလိုက်ရာ
Author: lubo601 | 8:49 AM | No မှတ်ချက် |
ရန်ကင်းသား Posted: 26 Feb 2013 06:03 PM PST
သူက ကျနော်ရဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းနေဖက်ပါ… ကျနော်တို့ ချစ်သူဘ၀ ၃ နှစ်ရှိခဲ့ပြီး အခု အိမ်ထောင်သက်တမ်းကလဲ ၃နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီ…
ပြဿနာ တစ်ခုပါဘဲ… သူနဲ့ကွာရှင်းပြီးတော့ သူနေရာသစ်မရမချင်း ကျနော်တို့ တစ်အိမ်တည်း အတူတူနေရဦးမှာပါ…
ဦးဝင်းငြိမ်း( ရွှေအမြူတေ) သို့ အိတ်ဖွင့်စာ...
ပုံမှန်နေ့တွေလို အိမ်ရှေ့မှ ဆိုင်ကယ်တွေ ဖြတ်သွားတိုင်း သမီးလေးများလားဟု ဒေါ်သိန်းမြင့် လှမ်းမျှော်ကြည့်နေမိသည်။ သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတိုင်း ထွက်ထွက်ကြည့်မိသည်မှာ ခဏခဏ။ သူမ၏မြေးမလေး အိမ်ပြန်မလာနိုင်တော့သည်ကို ဒေါ်သိန်းမြင့် လက်ခံ၍မရနိုင်သေး။
ဦးဏှောက် ကင်ဆာအကျိတ် မဖြစ်စေရန် အကြံပေးချက်
မာံသူ ရိန္ဒ and Thiha Kyi Win shared အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မ ပုံပျက် ခင်စိန်'s photo.
သြစတေလျားနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်း ဦးဏှောက်ခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ချာလီတီယို ရဲ့ အကြံဥာဏ်ပေးချက်အရ ဦးဏှောက်အကျိတ်ရောဂါ (သို့မဟုတ်) ဦးဏှောက်ကင်ဆာ ဖြစ်ခြင်း မှ ရှောင်ရှားဖို့ သံလိုက်လျှပ်စစ်စက်ကွင်း ထုတ်လွှင့်တဲ့ ပစ္စည်း စက်ကိရိယာတွေကို သတိနဲ့ကိုင်တွယ် သုံးစွဲသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။
by Seaman Nayminthu on Wednesday, February 27, 2013 at 7:32pm ·
မအူပင်မြို့နယ် မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စုမှာ ဒေသခံရွာသားများနှင့် လုံခြုံရေးတာဝန်က ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ဒေသခံများရော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါ ဒဏ်ရာရသည့်သတင်းက facebook စာမျက်နှာတွေမှာ နေရာယူလွှမ်းမိုးနေပြန်ပါပြီ။
..... ကဲသင့်ကားဘာ Octane ဓါတ်ဆီထည့်မလဲ ....
Zegyo Mandalay shared Myanmar Honda Fit Fan Club's photo.
Fit အပါအ၀င် ကားအများစုကတော့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကတော့ 92 Octane ကိုထည့်ကြမှာပါ .. ကျွန်တော် ပြောချင်တာက နောက်ပိုင်း EFI ကားတွေ အကုန်နဲ့ဆိုင်ပါတယ် ... 92 ဆိုတာကတော့ RON လို့ခေါ်တဲ့ Research Octane Number ခေါ် Octane အဆင့်တွေ ပါပဲ ။
Seaman Nayminthu shared Aye Chan Mon's photo.
၁ ။ သမ္မတကြီးအဖွဲ့ကိုနော်ဝေမှာ ဆန္ဒပြတာ ကို ဘာမှမပြောလိုဘူး ဒါပေမယ့် ပြပုံပြနည်းကို ဘ၀င် မကျဘူး ။ ရွှေပန်းဖြင့်ကြိုဆိုပါ၏ ဆိုတာ . . Liar Thein Sein ဆိုတာဘာသဘောလဲလူတိုင်းသိတယ် ။
ဒီရက်ပိုင်း၊ လပိုင်းအတွင်းမှာ စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေချည်း ဆက်တိုက်ကြားရလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူက မျှော်လင့်ထားပါ့မလဲ။ နာရေးသတင်းတွေချည်းဖြစ်၏။ အစ်ကိုကြီးမြင့်မောင်မောင်၊ အစ်ကိုကြီးမောင်မောက်(ဥက္ကလာ)၊ အစ်ကိုကြီးခင်မောင်မြင့် (မဟေသီ) ကျွန်တော်နဲ့ ညီအစ်ကိုလို ခင်နေတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။
ဘသောင်း ဟိန်း shared Young Buddhist's Association's photo.
“ ငယ်ငယ်ကတည်းက သိထားတဲ့အသိဆိုတာက
ကြီးတဲ့အထိ စွဲမြဲတာ များတယ်လေ။ ငယ်ငယ်
ကတည်းက ဒါလုပ်ရင် ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်၊
မြန်မာပြည် ကို ကျမ ချစ်တယ် .. အန်တီစု ကို ကျမ ချစ်တယ် .. ကုန် ကုန် ပြောမယ် .. သူ ဘာလုပ်လုပ် .. သူ ဘာဆုံးဖြတ် ဆုံးဖြတ် .. ကျမ ယုံတယ် ..
အဂ္ဂမဟာ ဒီမိုဖက်တီး shared Thit Thit Myint Saing's photo.
ကျမ နေမကောင်းဘူး .. FB မတက်ချင်ဘူး ..
ဒါပေမဲ့ .. နည်းနည်းလေးတော့ ရေးချင်လာတယ် .. ဒီပုံကို ကြည့် ...
သူတို့ ၂ ယောက် မှာ ..
ဆဲရေးတိုင်းထွာလောက်ရအောင် ဘယ်သူ့မှာ အပြစ်တွေကြီးနေပါသလဲ ..
manaw phyu <chotharlay@googlemail.com>
အရင်တုန်းကတော့ ဒီလို အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှုမျိုးကို သင် သတိထားမိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခု ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ဟိုတယ် အတော်များများ ဈေးကွက်အတွင်း
အလုအယက် နေရာယူလာကြပြီး နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားများ မြန်မာနိုင်ငံသို့
အ၀င်များလာခြင်း ရှိကြသည့်အပြင် ဟိုတယ်များကိုလည်း နိုင်ငံတကာ
အဆင့်အတန်းမီစေဖို့ သရီးစတား၊ ဖိုးစတား၊ ဖိုက်စတားအဆင့်တွေ
သတ်မှတ်လာကြတာကို တွေ့ရှိလာရပါသည်။ ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း
လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း စဉ်းစားလို့ လာကြပါပြီ။ ဟိုတယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့
ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တွေကတော့ အများကြီး ရှိပါသည်။
ဒီဘ၀မှာ မိသားစု စုံစုံလင်လင်နဲ့ နေခွင့် ရနိုင်ပါဦးမလား…
နော်ဝေနိုင်ငံကို အတုယူပြီး ကြိုးပမ်းရန် သမ္မတ ပြောကြား
အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်နေတဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု (ရုပ်/သံ)
မလက်တို ပဋိပက္ခတွင် ရာဘာကျည် လေးတောင့်နှင့် ခဲကျည် တစ်တောင့်သာ အသုံးပြုခဲ့
မလက်တိုကျေးရွာအုပ်စု ကို ပုဒ်မ ၁၄၄ ဆက်လက် ထုတ်ပြန်ထား
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နော်ဝေနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နံ့သာကုန်း မီး ငြိမ်းသတ်နိုင်ပြီဖြစ်
အစာအဆိပ်သင့်မှု ခြောက်ဦး သေဆုံး၊ ၂၇ ဦး ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူနေရ
မြိတ်မြို့သို့ ခိုးဝင်လာသည့် ဘင်္ဂါလီများအား စစ်ရေယာဉ်မှ ကျွန်းစု ရေပြင်တွင် ထပ်မံ ဖမ်းဆီးရမိ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ခိုးဝင်လာသူ ဘင်္ဂါလီများအား မြိတ်မြို့တွင် ဖမ်းမိ
မြန်မာ ဂြိုဟ်တု လွှတ်ဖို့ ဂျပန်ကူ
မအူပင်၊မလက်တို ပဋိပက္ခကြောင့် ရဲတစ်ဦးသေဆုံး၊ ရွာသား ၁၅ ဦးဒဏ်ရာရ
SSPP/ SSA နှင့် တိုက်ပွဲ အစိုးရတပ် ၃၀ ခန့်သေ
နော်ဝေတွင်သမ္မတဦးသိန်းစိန်းအား ဆန္ဒပြသူများနှင့် ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့မရောက်ဘူးသေးသော ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ် နန့် ကြည်အေးအား မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်လေ့လာရန်ဖိတ်ခေါ်
Author: lubo601 | 12:20 AM | No မှတ်ချက် |
ရုပ် ဆိုး shared Myanmar Online News's photo.
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့ ညနေလေးနာရီခွဲကျော်မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဟာ နော်ဝေ ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအပြီး တည်းခိုတဲ့ The Continental Hotel ကို ပြန်လာပါတယ်။
Author: lubo601 | 12:19 AM | No မှတ်ချက် |
Myo Myint Thwe shared ခွန် ဒီးယမ်'s photo.
နော်ဝေရောက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို အော်စလိုရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက ဆန္ဒပြဖို့ရှိတယ်လို့ သတင်း ရထားတဲ့အတွက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီခွဲလောက်မှာ အော်စလိုမြို့လယ်က ပါလီမန် ရင်ပြင်ဆီ ကျနော် ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
Author: lubo601 | 11:51 PM | No မှတ်ချက် |
by ဦး ဦး on Tuesday, February 26, 2013 at 7:17am ·
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ယုန်တစ်ကောင်နဲ့ လိပ်တစ်ကောင်ဟာ ဘယ်သူကအပြေးမြန်သလဲလို့ ငြင်းကြတယ်။
ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ကောင်ဟာ ပြေးလမ်းတစ်ခု သက်မှက်ပြီး အပြေးပြိူင်ပွဲ လုပ်ဖို့ သဘောတူကြတယ်။
တာလွတ်တာနဲ့ တပြိူင်နက် ယုန်ဟာ မြှားတစ်စင်း ပြစ်လိုက်သလို ပြေးထွက်သွားတယ်။
အကြင်နာလမ်းမှာ ဘဝခရီး သာယာဖို့
Author: lubo601 | 11:23 PM | No မှတ်ချက် |
by ဘဘကြီး ဘဘလတ် on Tuesday, February 26, 2013 at 2:42am ·
By 8 Days Journal Originally posted 05/02/2013 14:11PM
Everyone needs kindness, understanding and love. “လူတိုင်းအတွက် ကြင်နာခြင်း၊ နားလည်မှုနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ လိုအပ်ပါတယ်”။
လူ့ဘဝဟာ တိုတိုလေးပဲလို့ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ။် ဒါပေမဲ့ တိုတောင်းလှတဲ လူ့ဘဝမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်နိုင်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
Author: lubo601 | 11:04 PM | 1 Comment |
Min Min Myo Lwin shared အူတက်အောင်ရီရသောဟာသများနဲ့အခြား's photo.
တခါတုန်းက ပညာရေးဌာနက စစ်ဆေးရေးအရာရှိတယောက်ဟာ နယ်မြို့လေးတစ်မြို့က
စာသင်ကျောင်းတကျောင်းကို စစ်ဆေးရင်း ကျောင်းသားလေး တယောက်က်ို မေးလိုက်ပါတယ်။
Tun Tun Naing shared Aye Chan Mon's photo.
တပို့တွဲ လဆုတ်တစ်ရက် ၊ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့မှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံသားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ မွန်အမျိုးသားနေ့ ကျရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မွန်အမျိုးသားနေ့ မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ လေးကိုတော့ အားလုံးပဲ သိချင်ကြမယ်ထင်ပါတယ် ။
by Soe Min on Tuesday, February 26, 2013 at 2:46am ·
ဆိုးယုတ်မှုနှင့် ကောင်းမြတ်မှု...။ဤစကားလုံး နှစ်လုံးက ယခုတစ်လော စာရေးသူတို့ အကြားတွင် အတော် ရေပန်းစားသော စကားလုံး နှစ်လုံး။စာရေးသူ ယခုအပတ် ရေးဖြစ်သော ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ဆောင်းပါး အတော်များများတွင် ဤအကြောင်းကို ရေးဖြစ်သည်။ ယခု Teen တွင် လည်း ရေးဦးမည်။
ဖူးငုံတို့ အနေဖြင့်လည်း ဖူးငုံတို့ ဘ၀ တစ်လျှောက်တွင် ဆိုးယုတ်မှု များစွာကို ရင်ဆိုင်ခံစား ရနိုင်သည်။ ကလေး ဘ၀တွင် သူငယ်ချင်းများက အနိုင်ကျင့် ခံရတာမျိုး၊ အများနှင့် ယှဉ်၍ ဘက်လိုက် ဆက်ဆံ ခံရတာမျိုးမှသည် လောက၏ မတရားမှု ဒဏ်မှန်သမျှကို ဖူးငုံတို့ အနေဖြင့် ဆိုးယုတ်မှုဟု အမည် တပ်နိုင်သည်။
‎မန္တလေး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆
by Myat Thi Ha on Monday, February 25, 2013 at 8:43am ·
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၁၃၄၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈)
အောင်ဒင်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၃
အပိုင်း (၁၀) ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း (က)
၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက် နေ့စွဲ နဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ လက်မှတ်မထိုးပဲ အတည်ပြုပြဌန်းခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ များကို စိတ်ဝင်တစား လေ့လာကြည့်ပါတယ်၊ ထူးထူးခြားခြားတွေ့မိတာတွေကို အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြအပ်ပါတယ်၊
by Myanmar Journal on Monday, February 25, 2013 at 5:16pm ·
ဗြိတိန်က ဝါအကြီးဆုံး ဘုန်းတော်ကြီး နုတ်ထွက်
ပုပ်ရဟန်မင်းကြီး ဘန်နဒစ် ကနေ Keith O'Brien ရဲ့ နုတ်ထွက် လွှာကို လက်ခံ လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်
ဗြိတိန်က ဝါအကြီးဆုံး ကက်သလစ် ဘုန်းတော် ကြီး လည်းဖြစ် စကော့တလန်က ရိုမန် ကက်သလစ် အသင်းတော် ကြီးရဲ့ ရာထူး အကြီးဆုံး ဘုန်တော်ကြီး လည်းဖြစ်တဲ့ Keith O'Brien ဟာ
Min Sithu shared Aye Chan Mon's photo.
အလုပ်အကိုင်မရှိတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးဟာ Microsoft မှာ ရုံးဝန်ထမ်းအဖြစ် အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် လာလျှောက်ပါတယ်။ံHR မှ အင်တာဗျူးပြီး သူ့ရှေ့ မှာပဲ ကြမ်းပြင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြည့်ဖို့ ခိုင်းပါတယ်။ တကယ်ပဲ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြတော့ သူ့ကို အလုပ်ခန့်မယ်လို့ တစ်ခါတည်း စကားဆိုလိုက်ပါ တယ်။ ပြီးတော့ HR မန်နေဂျာက
Author: lubo601 | 5:13 PM | No မှတ်ချက် |
ဒီဇင်ဘာ မှာ ကျွန်တော်တို့စက်ရုံက အမြဲတန်း ဘုရားဖူးထွက်လေ့ရှိသည်။ ထို့အတွက် စက်ရုံက နှစ်ရက် ဆက်ပိတ်ပေးသည်။ ဒီနှစ် ကျွန်တော်တို့မိသားစု ဘယ်ကိုမှမသွားဖြစ်သည့်အတွက် နီးလည်းနီး အလွယ်တကူ သွားလို့ရကာ လမ်းလည်းကောင်းနေပြီဖြစ်သော တွံတေး ရွှေဆံတော် ဘုရားနှင့် ဗောင်းတော်ချုပ်ဘုရား။
Author: lubo601 | 5:03 PM | No မှတ်ချက် |
Lu Zein December 8, 2012
အောင်သန်းသည် မေ့လျော့ထားခြင်းကို ခံနေရသော သားငယ်တယောက်သာဖြစ်၏။ သူ့ကို သတိရသူမရှိ။ သူသည် စွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံနေရ၏။ သို့ရာတွင် သူ့အား လိုက်လံရှာဖွေ ကြမည့် မိဘတို့သည်မရှိ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမနှင့် ဆွေမျိုးညာတိကာတို့သည်လည်းမရှိ။
ရီ ယ ယ် လ စ် ဇ င် အ က်ဆေးနဲ့ နီ ယိုမော် ဒ န် အ က်ဆေး( အ ပို င်း- ၂ )
by Aung Yin Nyein on Tuesday, January 29, 2013 at 8:40am ·
၅။ သိစိတ်အလျဉ် ရေးနည်းအတိုင်း စီးမျောရေးသားခြင်း/ အာရုံခံစားမှု အစဉ်များ ကို ဖြတ်တောက် ရေးသားခြင်း
၁၈၉၀ ခုနှစ်မှာ ၀ီလျံဂျိမ်းရဲ့ စိတ်ပညာ အခြေခံကျမ်း( Principle of Psychology ) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီး အရှိတရား ( Reality ) ဆိုတာ ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ တည်ရှိနေခြင်း မဟုတ်၊ သိစိတ်ကတစ်ဆင့် ပုဂလိကအမြင်အရ တွေးတောကြံစည်ထားတဲ့ အရာသာ ဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ လူ့စိတ် ( Mind ) ကိုလည်း သိစိတ်အလျဉ်( Stream of Consciousness ) လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
Author: lubo601 | 4:56 PM | No မှတ်ချက် |
Kyaw Aye shared Thit Htoo Lwin blog's photo.
လယ်သိမ်းခံရသော ကျေးရွာသားများက နွေစပါးစိုက်ပျိုးရန်အော့ချတ်ဒ် ကုမ္ပဏီပိုင်ငါးမွေးကန်ပေါင်အား ဖျက် ကာရေဖွင့်ချ၍ကျုပင်များအား မီးရှို့သောကြောင့် မအူပင်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးမှပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်
ထားစဉ် ဒေသခံကျေးရွာသားများနှင့် အဓိကရုံးနှိမ်နှင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အကြားထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံ ကာ နှစ်ဘက်စလုံးမှ စုစုပေါင်း လူ၂၀ကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Author: lubo601 | 4:47 PM | No မှတ်ချက် |
သူတို့ ဘ၀များ ....
Author: lubo601 | 4:36 PM | No မှတ်ချက် |
KhingKhing Su and2other friends shared Nine Nine Sanay @ နိုင်းနိုင်းစနေ's photo.
Liu Bang အသက်(၄ဝ) အရွယ်တုန်းက တပ်သား၊ လက်နက်တွေတောင်မရှိခဲ့သေးဘူး။
Liu Bei အသက်(၅၂)နှစ်အရွယ်မှာ ခေါင်းမော့ပြီး "ငါ ဘယ်အချိန်ကျမှ အောင်မြင်မလဲ"လို့ မေးခဲ့တယ်။
Genghis Khan အသက်(၄ဝ) အရွယ်မှာ သွေးသောက် ညီအစ်ကိုရဲ့ သစ္စာဖောက်မှုကြောင့် စစ်ရှုံးထွက်ပြေးခဲ့ ရတယ်။
Steve Jobs အသက်(၄၂)နှစ်အရွယ်မှာ ပန်းသီးကုမ္ပဏီဆီပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန် ကုမ္ပဏီမှာသန်းတစ်ထောင်အကြွေးတင်နေတယ်။
Ren Zhengfei အသက်(၄၃)နှစ်အရွယ်မှ Huawei ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့တယ်။
Larry Page အသက်(၂၅)နှစ်အရွယ်မှာ Google ကိုတည်ထောင်ခဲ့တယ်။
Bill Gates အသက်(၂ဝ) အရွယ်မှာ Microsoft ကိုတည်ထောင်ခဲ့တယ်။
by Myo Tha Htet on Monday, February 25, 2013 at 6:35am ·
ကျွန်တော့်အတွက် အချိန်အားရတိုင်း ခေါင်းစားစေတဲ့ အမြွာမေးခွန်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းက တခုထဲ မေးတယ်၊ လိုချင်တဲ့ အဖြေက နှစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ၊ ဘာလုပ်မှာပါလဲ။ တရပ်စပ် စဉ်းစားတယ်၊ နားနားပြီး စဉ်စားတယ်။
ကိုဝိုင် ဝိုင်ကေ and2other friends shared ခွန် ဒီးယမ်'s photo.
မန္တလေးတိုင်း ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်ရှိ နှစ်ကျပ်ခွဲကျေးရွာ မီးလင်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ည ၁၁ နာရီခန့်က ရွာလူထုနှင့် ဒေသခံရဲများအကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပင်လုံစာချုပ်နှင့် ၁၉၄၇ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေ...
မင်္ဂလာတရားတော်နှင့်အညီ ကျင့်ကြံခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်......
မြန်မာပြည် ကို ကျမ ချစ်တယ် .. အန်တီစု ကို ကျမ ခ...
နော်ဝေတွင်သမ္မတဦးသိန်းစိန်းအား ဆန္ဒပြသူများနှင့် ဆေ...
ရီ ယ ယ် လ စ် ဇ င် အ က်ဆေးနဲ့ နီ ယိုမော် ဒ န...
ရီ ယ ယ် လ စ် ဇ င် အ က်ဆေးနှ င့် နီ ယိုမော် ...
သစ်ထူးလွင် သှုတင်းစုစည်းမှု (၂၅-၂)
မြန်မာမိန်းကလေးတိုင်း မှန်ကန်သော အလင်းကိုရောက်ရှိ ...
မဆလခေတ် ပညာရေးကို စမ်သပ်တာဝန်ယူခဲ့သူ ဒေါက်တာညီညီ ၏...
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(လေ)ကို ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီး မခန...
မန္တလေးမြို့တွင် မြန်မာစကားမတက်ဘဲ တရားမ၀င်နေထိုင်နေ...
ခင်မောင်ရင်၏ ကမ္ဘာ၊ ကမ္ဘာ၏ ခင်မောင်ရင် စာအုပ်ရီဗျူး ...
Inspirational guy with no arms plays guitar
ဆံစ မှ ခြေဖျားထိ ဝေါဟာရများ အပိုင်း- ၈ (Tooth)
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အစွမ်းကို အဆုံးထိမကြည့်ပဲ မဆုံးဖြတ်ပ...
ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများအား ဦးတည်၍ လှုံ့ဆော်သူအချို့အပေ...
ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နေသော အမျိုးသမီးများ ရင်သားအား နှိပ...
“မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးရှိပါသလားနှင့် ...
“ပြည်ပရောက်တွေ ဘယ်တော့ ပြန်လာမှာလဲ”
ဆံစ မှ ခြေဖျားထိ ဝေါဟာရများ အပိုင်း- ၇ (Lip)
~ ဟန်ချက်ညိဲတဲ့ဘဝ ဆိုတာ ~
သမီးလို မဖြစ်ပါစေနဲ့ ...
သင့် မျက်နှာလေးကို အလှပလေးတွေ တိုးလာအောင် လုပ်ဆောင...
၂၁ ရာစုရဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်ပညာရေး (World Class Education)
ချင်း ဧည့်ကြို ထမင်းစားဖိတ်ပွဲ